ဒီစာရင်းမှာ နာမည်ကြီးကစားသမားတွေ ပါဝင်နေတာတော့ အံ့အားသင့်စရာပါပဲ
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အခွင့်အရေး ဖြုန်းတီးမှု အများဆုံး ကစားသမားများ အပိုင်း(၁)
15 Nov 2018 . 3:13 PM
10 Mateo Kovacic – 15 shots – Chelsea
ခရိုးအေရှား နာမည်ကျော်ကွင်းလယ်လူ ကိုဗာချစ် Mateo Kovacic ဟာ ဆာရီ Sarri ရဲ့ နည်းဗျူဟာထဲမှာ အကောင်းဆုံး လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ကစားနိုင်သူဆိုတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုဗာချစ်ဟာ အသင်းသစ်အတွက် ဂိုးဈေးဦးမပေါက်သေးပါဘူး။ ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းချက် (၁၅)ကြိမ်မှာ တစ်ကြိမ်မှ မဂိုးခဲ့တဲ့ ကိုဗာချစ်အတွက် လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေကျရင် ချယ်လ်ဆီးကစားသမားဘ၀ ပထမဆုံးဂိုးရအောင် ကြိုးစားရတော့မှာပါ။
9 Olivier Giroud – 16 shots – Chelsea
ဒီစာရင်းမှာ ဂျရူး Olivier Giroud ပါဝင်နေတာကတော့ အငြင်းပွားစရာမရှိလောက်ပါဘူး။ အခု ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ တစ်ဂိုးမှ မသွင်းနိုင်သေးသလို ပြိုင်ပွဲစုံ (၁၂)ပွဲကစား (၁)ဂိုးသာ သွင်းခဲ့တာကတော့ ဂျရူးလို ကစားသမားမျိုးအတွက် မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပဲ ပြောရမယ်။ သူ့ရဲ့ ခြေစွမ်းအပေါ် ဝေဖန်မှုတွေကို ချေဖျက်ဖို့ ဂျရူးအတွက် သွင်းဂိုးတွေ လိုအပ်နေပါပြီ။
8 Diogo Jota – 16 shots – Wolve
ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက လိဂ်ချန်ပီယံရှစ်မှာ ၀ုလ်ဗစ်အသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြပြီး ချန်ပီယံဖလား ရရှိအောင် သွင်းဂိုးတွေနဲ့ ကူညီပေးခဲ့တဲ့ ဒီယိုဂိုယိုတာ Diogo Jota ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတော့ သွင်းဂိုး(၁)ဂိုးရအောင် ရုန်းကန်နေရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက်(၂၁)နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ ပေါ်တူဂီလူငယ်ကြယ်ပွင့် ကွင်းလယ်လူ ယိုတာဟာ ၀ုလ်ဗ်အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်မှာ အဓိက ကစားသမားအဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ရနေပြီး ဂိုးမသွင်းနိုင်ပေမယ့် အသင်းတိုက်စစ်ကို အကောင်းဆုံး ကူညီပံ့ပိုးနေသူဖြစ်လို့ မကြာခင် သူ့ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေကို မြင်တွေ့ရဖို့ ရှိနေပါပြီ။
7 Mario Lemina – 17 shots – Southampton
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကနေ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ လယ်မီနာ Mario Lemina အတွက် ပရီးမီးယားလိဂ် ခရီးလမ်းက ကြမ်းတမ်းလွန်းနေပါတယ်။ ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းချက် (၁၇)ကြိမ်မှာ တစ်ဂိုးမှ မ၀င်တဲ့အပြင် သူ့အသင်းကလည်း ရလဒ်တွေ ဆိုးရွားနေလို့ လယ်မီနာအတွက် မြွေပူရာ ကင်းမှောက်ဆိုသလိုပါပဲ။
6 Helder Costa – 18 shots – Wolves
ထူးဆန်းတာက ဒီစာရင်းမှာ ပါဝင်နေတဲ့ ၀ုလ်ဗ်ကစားသမား (၂)ဦးယောက်စလုံးက ပေါ်တူဂီ ကစားသမားတွေ ဖြစ်နေတာပါပဲ။ ဟယ်လ်ဒါကော်စတာကလည်း ဒီယိုဂိုယိုတာလိုပဲ အသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြနိုင်ပေမယ့် ဂိုးမသွင်းနိုင်တာက စိတ်ပျက်စရာကောင်းနေတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းချက်က (၃၄)ကြိမ်အထိရှိပြီး တစ်ဂိုးမှ မရခဲ့ပါဘူး။
အခုလောလောဆယ်တော့ ဒီစာရင်းမှာပါဝင်တဲ့ ကစားသမား (၅)ဦးကို အရင်ဆုံးဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ လက်ကျန် (၅)ဦးကို ဆက်လက်ဖော်ပြမှာဖြစ်လို့ အားပေးကြပါဦး .ပရိသတ်ကြီးရေ . . .
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ အခှငျ့အရေး ဖွုနျးတီးမှု အမြားဆုံး ကစားသမားမြား အပိုငျး(၁)
ခရိုးအရှေား နာမညျကြျောကှငျးလယျလူ ကိုဗာခဈြ Mateo Kovacic ဟာ ဆာရီ Sarri ရဲ့ နညျးဗြူဟာထဲမှာ အကောငျးဆုံး လိုကျလြောညီထှဖွေဈအောငျ ကစားနိုငျသူဆိုတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ကိုဗာခဈြဟာ အသငျးသဈအတှကျ ဂိုးဈေးဦးမပေါကျသေးပါဘူး။ ဂိုးပေါကျကနျသှငျးခကျြ (၁၅)ကွိမျမှာ တဈကွိမျမှ မဂိုးခဲ့တဲ့ ကိုဗာခဈြအတှကျ လာမယျ့ပှဲစဉျတှကေရြငျ ခယျြလျဆီးကစားသမားဘ၀ ပထမဆုံးဂိုးရအောငျ ကွိုးစားရတော့မှာပါ။
ဒီစာရငျးမှာ ဂရြူး Olivier Giroud ပါဝငျနတောကတော့ အငွငျးပှားစရာမရှိလောကျပါဘူး။ အခု ပရီးမီးယားလိဂျမှာ တဈဂိုးမှ မသှငျးနိုငျသေးသလို ပွိုငျပှဲစုံ (၁၂)ပှဲကစား (၁)ဂိုးသာ သှငျးခဲ့တာကတော့ ဂရြူးလို ကစားသမားမြိုးအတှကျ မဖွဈသငျ့ဘူးလို့ပဲ ပွောရမယျ။ သူ့ရဲ့ ခွစှေမျးအပျေါ ဝဖေနျမှုတှကေို ခဖြေကျြဖို့ ဂရြူးအတှကျ သှငျးဂိုးတှေ လိုအပျနပေါပွီ။
ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက လိဂျခနျြပီယံရှဈမှာ ဝုလျဗဈအသငျးအတှကျ ခွစှေမျးပွပွီး ခနျြပီယံဖလား ရရှိအောငျ သှငျးဂိုးတှနေဲ့ ကူညီပေးခဲ့တဲ့ ဒီယိုဂိုယိုတာ Diogo Jota ဟာ ပရီးမီးယားလိဂျမှာတော့ သှငျးဂိုး(၁)ဂိုးရအောငျ ရုနျးကနျနရေတယျ။ ဒါပမေဲ့ အသကျ(၂၁)နှဈသာ ရှိသေးတဲ့ ပျေါတူဂီလူငယျကွယျပှငျ့ ကှငျးလယျလူ ယိုတာဟာ ဝုလျဗျအသငျးရဲ့ ကှငျးလယျမှာ အဓိက ကစားသမားအဖွဈ ပါဝငျခှငျ့ရနပွေီး ဂိုးမသှငျးနိုငျပမေယျ့ အသငျးတိုကျစဈကို အကောငျးဆုံး ကူညီပံ့ပိုးနသေူဖွဈလို့ မကွာခငျ သူ့ရဲ့ သှငျးဂိုးတှကေို မွငျတှရေ့ဖို့ ရှိနပေါပွီ။
ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကနေ ပွောငျးရှခေဲ့တဲ့ လယျမီနာ Mario Lemina အတှကျ ပရီးမီးယားလိဂျ ခရီးလမျးက ကွမျးတမျးလှနျးနပေါတယျ။ ဂိုးပေါကျကနျသှငျးခကျြ (၁၇)ကွိမျမှာ တဈဂိုးမှ မဝငျတဲ့အပွငျ သူ့အသငျးကလညျး ရလဒျတှေ ဆိုးရှားနလေို့ လယျမီနာအတှကျ မွှပေူရာ ကငျးမှောကျဆိုသလိုပါပဲ။
ထူးဆနျးတာက ဒီစာရငျးမှာ ပါဝငျနတေဲ့ ဝုလျဗျကစားသမား (၂)ဦးယောကျစလုံးက ပျေါတူဂီ ကစားသမားတှေ ဖွဈနတောပါပဲ။ ဟယျလျဒါကျောစတာကလညျး ဒီယိုဂိုယိုတာလိုပဲ အသငျးအတှကျ ခွစှေမျးပွနိုငျပမေယျ့ ဂိုးမသှငျးနိုငျတာက စိတျပကျြစရာကောငျးနတေယျ။ သူတို့နှဈဦးရဲ့ ဂိုးပေါကျကနျသှငျးခကျြက (၃၄)ကွိမျအထိရှိပွီး တဈဂိုးမှ မရခဲ့ပါဘူး။
အခုလောလောဆယျတော့ ဒီစာရငျးမှာပါဝငျတဲ့ ကစားသမား (၅)ဦးကို အရငျဆုံးဖျောပွလိုကျပါတယျ။ လကျကနျြ (၅)ဦးကို ဆကျလကျဖျောပွမှာဖွဈလို့ အားပေးကွပါဦး .ပရိသတျကွီးရေ . . .